XUKUUMADU HESHIISYADA AY DAWLADAHA LA GASHAY WAA INAY SOO GUDBISAA HADII MEELO HORE… | Toggaherer's Weblog
MADAXWEYNE RIYAALE IYO WAFTIGII UU HOGAAMINAYAY OO BOOQDAY JAAMACADA BURCO IYO CUSBITAALKA SAWIRO
â€œMuwaadiniinta Somaliland ayaan ka mid ahay muddo dheerna siyaasada waan ku soo jiray kolaybana mustaqbalka waxaan jecelahay inaan ka mid noqdo waanan u tartami doonaa labadaa xil ee aad sheegtayâ€ sidaa waxa yidhi guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Md:Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) oo shalay xafiiskiisa waraysi khaasa uu kula yeeshay Haatuf, kaas oo uu kaga waramay arrimo ku saabsan xeerarka golahooda ka soo baxay, hashiisyada ay xukuumada Rayaale la gasho dawladaha shisheeye, damiciisa mustaqbal ee madaxtinimada Somaliland, arrimo la xidhiidha warrarka mooshinka xil ka xayuubinta madaxweyne Rayaale oo uu beeniyey iyo guud ahaanba heshiiskii guddida dhex dhexaadintu ay ka soo saartay khilaafkii u dhexeeyey madaxweyne Rayaale iyo axsaabta mucaaridka ah.
Waraysigaasi oo dhinacyo badan taabanayaana waxa uu u dhacay sidan;
S:Maadaama muddo afar sanadood ahi ay ka soo wareegtay muddadii golihiina wakiiilada la soo doortay maxaad isleedahay golihiina way u qabsoomeen oo lataaban karaa, iyadoo waliba lagu dhaliilo xildhibaanada inaanay dib ugu noqonin goboladii?
J: Horta golaha wakiiladu waa gole xilkiisu yahay xeer jedin mudadii uu jirayna goluhu xeerar gaadhaaya labaataneeyo isugu jira kuwo ansixintoodii dhamaatay dhaqan galna noqday iyo kuwo process ku jira, golaha way kasoo baxaan runtiina waxan qabaa in goluhu kaalintiisii xeer dejinta uu ka qaybqaatay, inkastoo khilaafaad badan oo u dhexeeyey golayaasha qaranku ay jiraan, hadana wada shaqayntii golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadu bilow wanaagsan ayuu hada marayaa, balse cuqdada kaliya ee jirta waxa weeyi oo loo baahan yahay in xildhibaanadu ay shacbigii soo doortay iyo deegaanadii laga soo doortay ay dib ugu noqdaan oo ay duruufahooda lasocdaan waajib.
S:waxa jira xeerar ka horeeyey aftidii distoorka Qaranka oo la ansixiyey 1997 oo aan wafaqsanayn distoorka laguna saleeyey axdi qarameedkii distoorka xeerarkaasi dabagal iyo daraasad ma ku samayseen gole ahaan?
J:Horta wax daraasada kumaanu samaynin xeerarkii naga horeeyey balse way suurtaglin distoorka ka hor xeerarkii la ansixiyey ay dhacdo inaanu waafaqsanayn, balse waxa muhiima oo loo baahan yahay in dib u eegid lagu sameeyo xeerarkaa iyo shuruucda ka soo baxay goleyaashii naga horeeyey, haddana wxaan filayaa in guddida dib u eegida shuruucda dalku ay isku soo duba ridi doonto qiimayna ku soo samayn doonaan.
S: xeerarka golihiina ka soo baxay ee aad ansixiseen waxay intooda badani iska yaalaan madaxtooyada, xafiiskii faafinta xeerarkana madaxweynuhu ma samaynin dadweynahana looma faafiyo maadaama xeerarka aad ansixisaan aanu dhisnayn xafiiskii faafinta lahaa siday ugaadhi karaan shicibkii lagu dhaqayey?
J:xeerkii nidaamka garsoorka ee goluhu sameeyey ayaa waxa uu qeexayey oo uu dhigayey in la sameeyo xafiiskii garyaqaanka guud ee dawladda, madaxweynuhuna waa inuu dadajiyo dhismaha xafiiska garyaqaanka guud si xeerarku u gaadhaan shicibka, inta xafiiskii faafinta xeerarka la samaynayana waa inuu madaxweynuhu maxkamada sare u gudbiyo xeerarka golaha ka soo baxay ee la ansixiyey.
S: waxa jira warar sheegaya in shirguddoonkiina koox mudanayaal ahi ay idiin soo gudbisay mooshin xil ka xayuubina oo ka dhana madaxweyne Riyaale taas oo mudanayaal ka tirsan goluhuna ay warbaahinta ka sheegeen arrinkaasi maxaa ka jira?
J:madaxweynuhu xurmo ayuu leeyahay oo waa madaxweynihii Qaranka, laakiin qof sharciga ka sareeya ma jiro, dariiqooyinka iyo sababaha madaxweynaha xil ka xayuubin lagu qaadi karana distoorka ayaa tilmaamaya oo ay ku cad yihiin, mana aha in arrinku noqdo sheeko iyo male awaal ee waa inuu noqdo wax xaqiiq ku fadhiya, laakiinse anaga shirguddoon ahaan wax mooshin ah oo lagu impeach garaynayo madaxweynaha oo na soo gaadhay ma jiro.
S:maadaama xisbiga UCID lagaa soo doortay dhawaan olole aad ugu baxdeen gobolka Togdheer waxa lagu macneeyey in damac mustaqbal kaaga jiro hogaanka xisbiga UCID guddoomiyihiisa iyo Jagada madaxweynenimada Somaliland doorka dambe sidaa darteedna UCID laguugu wareejin doono arrimahaasi maxa ka jira adigase damac ma kaaga jiraa mustaqbalka in aad isku soo sharaxdo jagada madaxweynaha?
J:Horta muwaadiniinta reer Somaliland ayaan ka mid ahay muddo dheerna siyaasada waan ku soo jiray kolaybana mustaqbalka markay haboonaato waxaan jecelahay inaan ka mid noqdo dadka u tartama labadaa xil ee aad sheegtay wakhtiga munaasibka ah haddii alle yidhaahdo.
S:socdaalka madaxweyne Rayaale ugu baxay gobolada saaxil iyo togdheer waxa lagu tilmaamay socdaal kaambayna adigu sideed u aragtaa safarkiisa?
J:Horta madaxweynuhu socdaal wuu ku tagi karaa gobolada iyo degmooyinka dalka madaxweynuhuna waxa uu ku sheegay socdaalkiisa u kuur-galka xaaladaha deegaanada, inay kaambayn tahay iyo inaanay ahayna waa la dareemi doonaa, laakiinse ilaa hadda afka madaxweynaha inuu ka yidhi uun baynu ka haynaa.
S:madaxweynaha waxa dhaliil looga soo jeediyaa balanqaadyadii uu dhagaxa ku dhigay dhismaha warshadaha sibidhka ee Berbera 26 june, 2007-dii oo aanu waxba ka fulin, balan kalana wuu soo qaaday, adigana gobolka Saaxil ayaa lagaa soo doortay arrinkaa sideed u aragtaa?
J:Haddii ay xukuumaddu hawl ay dhagax dhigtay fuli weyday runtii waan ka xumahay laakiin waxan u soo jeedin lahaa xukuumadu haddii balanqaadyadii hore ay fuli waayeen, kuwa dambe ee la qaadayaa waa inay fulaan.
S:Xukuumadu heshiisyada ay la gasho dawladaha shisheeye oo sida sharcigu dhigayo ay waajib ku tahay in golihiina laga ansixiyo, idin ma horkeento, xiitaa dalalka darisyada heshiisyada ay la galaan, markaa miyaanay arrintaasi ahayn distoor jabin?
J:Horta talaabo kasta oo aynu qaadaynaa waa inay haysaa shuruucda iyo distoorka dalku, distoorkuna waxa uu waajib kaga dhigayaa xukuumaddu heshiisyada ay la gasho dawlado in golaha wakiilada ay horkeento mar hore ayaanu xukuumada usoo jeedinay in heshiisyada ay gashay ee caalamiya ay golaha usoo gudbiso, ilaa hadana may soo gudbin, waxaanuse Xukuumadda ugu baaqaynaa in dariiqada uu waajibaadka kaga dhigo distoorku ay ka soo baxdo.
S:Guddidii dhexdhexaadinta ka gashay khilaafkii xisbiyada mucaaridka iyo madaxweyne Rayaale ee goâ€™aamadana ka soo saartey sidee sharciga u waafajinaysaan goâ€™aamadaasi?
J:Guddidaasi qodobadii heshiiska ee ay soo saareen saddexda xisbi way ogolaadeen, madaxweynuhuna wuu ka cudur daartay, waxaan qabaa in hawshaasi ay soo dhawaysay in doorashadii ay qabsoonto, wixii uu noo ogol yahay xeerka iyo distoorku ee ku saabsan hawshaa wax ka qabashadeeda waxaanu jecelnahay inaanu shuruucdeena u raacno, golaha iyo guddidu inay xidhiidhaana waanu jecelnahay.